Ngengqondo ehluzekile ukuthi kukhona ngokuvamile catch amathuba iningi ekhethekile. Ngisho akukho catch kunengqondo ukucabanga ukuthi kungase kube. Lokhu kucabanga kuyokusiza ukuba uhlale niqaphe futhi uhlole amadili ngokucophelela ngaphambi ungena kubo. Ngezinye izikhathi singase ukugijima ogibeni ngoba singazi ukwenza umsebenzi wesikole sethu kahle, uthole too smart ngakho noma shesha. Nazi ezinye izingibe kudingeka baqaphe nalapho bethenga umshuwalense car Ukusabalala.
Ukuthenga emva Quote First
Lokhu iphutha saqala lokwenza. Ngaphandle wena onguchwepheshe kule ndaba ubungayiphendula kanjani wazi uthola indaba enhle futhi intengo uma ungenalo uqhathanise ongakhetha yakho? Uma abukhali kakhulu ukuthola imoto yakho entsha ihlanganiswa ngokushesha kangangokuba ungakwazi ukushayela ungase gibe wena ibe ukuvikeleka okunganele noma ezibizayo.
Kuthatha amahora ambalwa futhi ikakhulukazi izinsuku ukucinga imoto. Ungakwazi kalula hlola yemtselo lefanele okwamanje. Akudingeki ukuba ngumnikazi imoto ngaphambi ungathola lesisho ngoba. Uma kwakumelwe bamemeze Mihla broker imininingwane ezahlukene imoto ukuthola lesisho bayohlala get fed up nawe ngokushesha. Nokho, online quote ezisekelweni ukuba uthole izingcaphuno for iyiphi imoto owanikwa. Ungasebenzisa la mathuluzi okuningi njengoba ufuna njengoba wenza umsebenzi.
Ukuthenga Coverage anganele
Omunye amaphutha ezivamile abashayeli ukwenza ukucabanga ukuthi izinqubomgomo kuyoba ishibhile uma beya for ubuncane state edingekayo izikweletu cover. Umehluko phakathi premium indaba eziyisisekelo futhi umuntu olunzulu kungaba couple kuphela ngama-dollar angamakhulu kwezinye izimo ikakhulukazi uma ngimadanise ukucophelela.
Cover Basic kuba esincane kakhulu futhi belulekwa ukuba bathenge izikweletu anele ukumboza esikhundleni. Ngaphezu kwalokho, lezi zinqubomgomo ahlinzeke khava ekulahlekelweni zakho siqu. Automobiles Yimali ngokuvamile ezinkulu abantu abaningi. Ukuchitha $5,000 for an old esetshenziswa auto kubonakale like a fortune for wena uma ungenayo imali okuningi. Uma sebehola kahle futhi imali ubungeke ube ushayela $50,000 car noma kunjalo. Kuzo zombili izimo kungaba imali eshisiwe hhayi umshwalense obonelela.
Ngokuvamile, ayanda nokufakelwa ephansi amaphrimiyamu uthole. Ngakho, uma othile umshuwalense imoto quote okuningi ezishibhile abanye kufanele ahlole nokufakelwa. Lona imali kufanele akhokhele ekhukhwini lakho ngaphambi umshwalense wakho ungakwazi ukuyikhokha lonke umonakalo. Uma usetha phezulu nawe ungagcina ukukhokha umonakalo iningi wena. Futhi kunzima ukubhekana naso uma une ezingaphezu kweyodwa yisehlakalo ngonyaka.
A policy standard kufanele amboze wonke umuntu ophilayo ndlininye nawe kanye yimuphi abashayeli ngezikhathi ezithile. Uma ukwamukela eshibhile umshuwalense auto quote ungase hlola ngubani uvunyelwe ukuba ukushayela imoto yakho. Uma Ngeke sivumele noma ubani omunye ukuba ashayele imoto insured empeleni ungase ufune ukunciphisa abashayeli pholisi noma abashayeli wabala kuphela imali. Kubalulekile ukwazi ukuthi kanti ngubani hhayi insured ukushayela imoto yakho bese uphatha ngokufanele.
Izimo Special and Okungafakiwe
Watch out for izimo ezikhethekile in the wordings inqubomgomo. Ngokwesibonelo, abanye izinqubomgomo kungavumela umshwalense ukusebenzisa aftermarket izingxenye ukulungisa i auto insured elandelayo umonakalo kulo. Lokhu kungenzeka kube yinkinga enkulu uma une endala futhi uthola izaphulelo okuhle ngenxa yalesi isimo. Kodwa ungafuni izimo ezinjalo uma umnikazi ngezimoto entsha sasivumela futhi kuyabiza.
No Car Courtesy
Esinye isici ejwayelekile izinqubomgomo eshibhile ukuthi kungenzeka zinikeza imoto ngezilokotho lapho ungowenu egalaji usalungiswa. Again, lokhu kungenzeka kube yinkinga enkulu ngawe futhi empeleni ungase ukhethe uthole izaphulelo manje kunokuba imoto ngezilokotho uma imoto yakho njalo Ufika lilimele. Just ukuthi abantu abaningi ngemva kwesenzakalo ukuthi benganikezwa imoto ngezilokotho lapho kwakungekho lungiselelo onjalo inqubomgomo yawo.
Sithatha Zonke Izinqubomgomo Ingabe Same
Kungenzeka A single auto umshwalense enikeza amazinga eziningana ezehlukene izinqubomgomo ukuthi abazazisayo zonke izinqubomgomo ethengiswa kwakuyokwenzeka okufanayo kancane abangenalwazi. Wonke inqubomgomo has ukuhluka kancane noma enkulu nomunye. Lokhu ngokuvamile kubonakala intengo. Ngokuvumelana ne cheapautoinsurance.net, "Ungase uthole esingaphansi inqubomgomo eyanelisayo futhi namanje ukukhokha premium full ngezinye izikhathi uma uhluleka ngimadanise".
Amanani Sithatha Ingabe Similar yonkana Market
Again, lokhu ukulindela okungenangqondo ngoba zonke inkampani ngamunye njengoba uthola. Sinenkosi engozini nokuphathelene kanye izibalo premium futhi ngendlela ehlukile ukuqhuba ibhizinisi. Uma inkampani ethandwa kakhulu babeyokwenza ngokwemvelo bakwazi ukukhetha best of the bunch mayelana ingozi. Uma bebona isibonakaliso kancane ingozi zingase ngokushesha amanani abo. Nokho, inkampani engaphansi popular kuyodingeka ukugcina amanani abo isheke ukwenza isiqiniseko inganqoba phezu ibhizinisi.
Ukukhokhela by Monthly izitolimende
Kunjalo, kuba lula ukukhokha izitolimende by zenyanga akungabazeki ngakho. Nokho, umshuwalense kukhona zikhokhwe ngesikhathi liqala. Uma inkampani uvumela wena ukusakaza inkokhelo banikela kuwe credit. Ngokuvamile Lokhu kuza ngesikhathi izindleko. Ngokuvamile inzalo kanye enikeza izaphulelo ezikhethekile for ntu ukukhokha upfront futhi full. Uzogcina ukukhokha more uma basakaze ukukhokhwa.
Ukuthenga i Expensive ukuba Insure Automobile
Abashayeli abaningi bathenga izimoto futhi ngabona kamuva ukuthi kuyabiza kakhulu umshwalense obonelela rides yabo entsha. Uma ucabanga izimoto ezemidlalo, SUV, 4x4s and abanhliziyo engavamile kufanele uqaphele ukuthi kungase kubize ukuba umshwalense obonelela kubo. Umehluko Premium kungaba okuningi njengoba kathathu phakathi ukukhetha imoto A and Car B.
Awudingi ukwazi izimfihlakalo eziningi ukuze uthole ezingabizi yomshuwalense yemoto. Kodwa, udinga ukwazi futhi baqaphe a tricks ambalwa. Bese, ungagcina ukonga imali yokuvuselela emva ukuvuselelwa. Ukwehluleka ukugcina lezi zimiso eziyisisekelo kungaba imali.